" ၂၀၁၁ သို့မဟုတ် နှစ်သစ် ဥယျောဇဉ် "
အချိန်တွေက အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးဆင်းနေကြတယ် ။ ၂၀၁၀ ..... "သူ" လဲ လည်ပတ်နေတဲ့ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ သဘောတရားတို့အတိုင်း သိပ်မကြာခင် ကိုယ်တို့ကို နှတ်ဆက် ထွက်ခွာတော့မယ်ပေါ့ ။ "သူ" မရောက်လာခင်တုန်းကတော့ "သူ့" ကို ကိုယ်တို့တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ တနင့်တပိုးကြီး ပွေ့ပိုက်ပြီ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြိုခဲ့တယ် ။ အသစ်အသစ်တွေကို ပိုလို့ရင်ခုန်တတ်ကြတဲ့ ကိုယ်တို့လူသားတွေက အသစ်ဆိုရင် မျှော်လင့်ချက်တွေသိပ်ထားချင်ကြတယ်လေ...... ။ ဒါပေမဲ့ အသစ်တွေတိုင်းဟာ အချိန်တခုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ ဟောင်းသွားကြရင်တော့ သိပ်အလေးမထားမချင်ကြတော့ပြန်ဘူး ။ အဲ့ဒီထက် အချိန်တခုကို နောက်ထပ် ထပ်ကျော်ဖြတ်လာရင်တော့ အဟောင်းလေးတွေဟာ အမေ့ခံလေးတွေ အဖြစ်ကို ရောက်ကြရပြန်တယ် ။ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ရှိလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ သူတို့လေးတွေက လွမ်းမောဖွယ်အဖြစ်နဲ့ပေါ့.......
၂၀၁၀ ကို ကြိုဆိုသလို ၂၀၁၀ကို ရင်ခုန်သလို ကိုယ်တို့တွေ ၂၀၁၁ ကိုလည်း ရင်ခုန်ကြအုန်းမယ် ။ ကြိုဆိုကြအုန်းမယ် ။ ၂၀၁၁ မှ မဟုတ်ပါဘူး ။ ၂၀၁၂ မှာကော ၂၀၁၃ မှာကော ... အိုးးးး လာကြမယ့် အသစ်အသစ်သော နှစ်တွေတိုင်းကို ကိုယ်တို့တွေ ရင်ခုန်ကြအုန်းမယ် ။ ကြိုဆိုကြအုန်းမယ် ။ ပြီးရင် မေ့ကြအုန်းမယ် ။ ချောင်ထဲထည့်ထားကြအုန်းမယ် ။ တိုက်ဆိုင်တာတွေရှိခဲ့ရင်လည်း လွမ်းမောကြအုန်းမယ်လေ ။ ဒါဟာ...အမြဲလည်ပတ် ခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘာဝ ဘဝရထားတွဲကြီးရဲ့ ပတ်လမ်းတွေ အများကြီးထဲက ပတ်လမ်းတခု ။ အဲ့ဒီအတွက် "အသစ်မြင် အဟောင်းမေ့...အလေးမထားလိုက်လေခြင်း " လို့ ကိုယ် အပြစ်မတင်လိုပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတော့ တွေးမိတယ် ....
အသစ်ကို အားပိုကောင်းစေတာဟာ အဟောင်းလေးတချို့ ရှိနေလို့လို့ ကိုယ်ကယုံကြည်ထားတယ် ။ အဟောင်းနဲ့အသစ်ဟာ မြင်သာစွာကော မမြင်သာစွာပါ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ " ကွင်းဆက်လေးတွေ " လေ ။ မှားခဲ့တာ ဖြစ်စေ မှန်ခဲ့တာ ဖြစ်စေ ပေါ့ ။ ပြန်အောက်မေ့တဲ့အခါ ပီတိဖြစ်ရင်း ၊ နာကျင်ရင်း ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရင်း ၊ သတိတရ လွမ်းမောရင်းပေါ့..... ။ အဟောင်းတွေကနေ သင်ယူရင်း ကိုယ်တို့တွေ အသစ်တွေကို မွေးထုတ်နေကြတာလို့ ကိုယ် ခံစားမိတယ် ။ ကိုယ်တို့တွေဟာ နှလုံးသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသားတွေဆိုတော့ တခါတလေမှာ " ခံစားမှု " ဟာ လိုတာထက် ပိုပြီး ရှေ့ကိုရောက်သွားတတ်ကြတယ် ။ တခါတခါကျလဲ ဖြစ်ချင်တာတွေကို အတင်းဖိနှိပ် ထိန်းချုပ်ပြီး မှန်ကန်လား မမှန်ကန်လား မသေချာပေမဲ့ " ဦးနှောက် " ကို စီမံချက်ချဖို့ အတင်းအမိန့်တွေ ပေးတတ်ကြတယ် ။ ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ဘောင်ထဲမှာပဲ ပိတ်မိသွားပြီး ရုန်းဖို့ခက်ရတာတွေလည်း အကြိမ်ကြိမ် .. ။ ပိုအားကောင်းတဲ့ အသစ်တွေကို ဖြစ်စေတဲ့ အဟောင်းတွေကို ဖန်တီးရာမှာ အဲ့ဒီ " မျှခြေ " ကိုတော့ ကိုယ်တို့တွေ ထိန်းတတ်ဖို့ သိပ်လိုအပ်တယ် ။ အဲ့ဒီ " မျှခြေ " ပျက်သုံးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ အသစ် နဲ့အဟောင်းကို လှပစွာ ချိတ်ဆက်နိူင်ဖို့ ပြသာနာတွေ ရှိလာနိူင်တာပေါ့လေ ။
အဟောင်းတွေတိုင်းဟာ တသသ လွမ်းဆွတ် ၊ တွေးမိတိုင်း ပီတိဖြစ် ဆိုတဲ့ ချိုသော မြသော အဟောင်းများချည်းတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်ပေါ့လေ ။ ချိူစေ ၊ ခါးစေပေါ့။ အဲ့ဒီအဟောင်းတွေတိုင်းဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ လက်တွေနဲ့ ကိုယ်တို့တွေ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့ကြတာချည်း ဆိုတာတော့ သေချာတယ် (သိလျှက်နဲ့ဖြစ်စေ ၊ မသိတာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တွန်းအားတခုကြောင့်ဖြစ်စေပေါ့) ။ အတိတ်မို့ အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ပါ ဆိုတာမျိုးကို ကိုယ် ငြင်းဆန်ချင်တယ် ။ အတိတ်ဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ အရိပ်တွေပါ...
ခါးတာဆို မကြားလိုပါ ဆိုတာ လူ့သဘာဝ ဆိုပေမဲ့ ချိုမြိန်သော အဟောင်းများ အရသာရှိကြသလို ခါးသော အဟောင်းများမှာလည်း " အား "တွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ် ။ ပိုအားကောင်းတဲ့ အသစ်တွေကို ဖြစ်စေဖို့ရာ ဖန်တီးပြီးခဲ့တဲ့ ချိုသော ၊ ခါးသော အားလုံးသော အဟောင်းတို့ကို ကိုယ်တို့ ရဲရဲကြီး " လက်ခံ " ဖို့လိုတယ် ။ လက်ခံပြီးမှသာ လိုအပ်သလို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ၊ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရေးဆွဲနိူင်မယ် ။ " ပြသာနာ " တွေ ငြိမ်းနိူင်မယ် ။ အဲ့ဒီကျမှသာ အဟောင်း နဲ့ အသစ်ကို ကွင်းဆက်လှလှလေး ဖြစ်အောင် ချိတ်ဆက်နိူင်မယ်မဟုတ်လားလေ ။
အားလုံးလည်း ကွင်းဆက် လှလှလေးတွေ ဖန်တီး ချိတ်ဆက်နိူင်ကြပါစေ ။
# စာတည်းလုပ်ပေးသော သူငယ်ချင်း ကူးလွေ့ အား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း ။
ထုံးစံအတိုင်း " ပုံ "ပံ့ပိုးသော ဂိုဂယ်အားလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းး)
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 1:23 PM5comments
ရှမ်းရိုးရာ ကိန္နရီ ကိန္နရာ အက
တိုက်ရိုက်တင်တာ မှန်သမျှ ကွာလတီ အရမ်း ကျကုန်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ခါတော့ ကိုမိုးခေတ် အကြံပေးသလို ယူကျု ကနေပဲ တင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 2:31 PM0comments
မြောက်ပြန်လေ မြမြသွေးမှာ ချမ်းခိုက်တုန်ရီ....
လှစ်သိုချို ဟန်ဆောင်ကင်းတယ် ခင်ဖွယ့်ရှမ်းပြည်....
တက်နေခြည် ခြုံကာအထွေးမှာ ရွှင်ပွဲဖွဲ့တည်...
လွမ်းရယ်မပြေ သံသာတေးနဲ့ ဆိုရေးဖွဲ့သီ....
မိခင်ကြို အိမ်အိုလေးနဲ့ ထိုတောလမ်းဆီ....
အရောက်ရယ်ပြန် ခိုဝင်ဦးမယ် ဆုံးဖြတ်ရွယ်ရည်......
အိမ်... ပြန် ... ဦး... မည်.....။ ။
ရေးသားသူ- စိုင်း Time 8:31 AM 1 comments
ရေးသားသူ- စိုင်း Time 3:45 PM5comments
အရာအားလုံး တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ငိုမယောင်မိုးတိမ်တွေ ပွင့်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆီက
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 7:48 AM7comments
ရှမ်းပွဲ အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ရီဟာဇယ်ပါ။ စတူဒီယိုထဲမှာ မီး သီး လေး သေးသေး သုံးလုံးသာ ထွန်းထားပေးလို့ မှောင်မဲမဲ ဖြစ်နေတာလေး သီးခံပေးကြပါခင်ဗျား။ ဘလော့ပေါ် တင်ပြီးတိုင်း ကွာလတီအရမ်းကျသွားတဲ့အတွက် ဖူးစကရင် ကြည့်လို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာ..။ ကွာလတီမကျအောင်တင်တဲ့နည်းလေး ရှိရင် မ,စ ပေးကြပါဦး။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 6:37 PM0comments
အမှတ်မထင် မှားတဲ့ အမှား
မှတ်မှတ်ထင်ထင် မှားတဲ့ အမှား
မသိစိတ်ကြောင့် မှားတဲ့ အမှား
သိလျှက်နှင့် မှားတဲ့ အမှား
ရိုးသားစွာ မှားမိတဲ့ အမှား
မရိုးသားစွာ မှားတဲ့ အမှား
မှားပြီဆိုမှတော့ မမှန်တော့ဘူးပဲလေ ....
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 3:43 AM3comments
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ ဒီဘီအက်စ် ဘဏ်က ပွဲကြည့်လက်မှတ်ပေါင်း သုံးထောင် မဲဖောက်ပေးတဲ့အထဲမှာ လက်မှတ်တစ်စုံ မဲပေါက်တဲ့အတွက် သွားကြည့်ခဲ့ရတာလေးတွေပါခင်ဗျား။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 7:01 PM0comments
သူက အရာရာကို ချည်တယ်
ပြန်တုပ်မိတာလဲ အခါခါ ။
သူကတော့ မစဉ်းမစား ရှေ့ကသွားတယ်
သိမှု၊ မသိမှု ...
တိုးရင်း တိုက်ရင်း တလှည့်စီဆိုသလို ဝါးရင်းမြိုရင်း ။
သူက အင်အားရှိ "ဒြပ်မဲ့"
" ဒြပ်ရှိ" တဲ့"ကိုယ့်" ကို
သေပွဲတွေလည်း ဝင်စေတတ်သေးတယ် ။
# ဂိုဂယ် မှပုံအား အနည်းငယ် ဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်ထားသည် ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 12:24 AM5comments
လှံချွန်းထက် ရှ၏ မြ၏ ။
ကိုယ့်စိတ်အလိုအတိုင်း ဆိုလိုက်တဲ့ "စကားတခွန်း" ဟာ ခပ်ဖွဖွ လို့သာထင်ရပေမယ့် တပါးသူကို မွမွကြေ သွားစေတာမျိုးဆို ဝမ်းနည်းစရာ သိပ်ကောင်းတယ် ...... ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 12:08 PM6comments
သက်ရင့်အချစ်တွေသာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ထမ်းပိုးပြီး
စိတ်ကူးတို့ ထပ်တူ ကျမယ့်နေ့ကိုစောင့်တယ်
ရင်မှာ ထပ်တူကျ အလွမ်းတွေ တနင့်တပိုး
ရွှေရောင် အိပ်မက်တွေ ရိတ်သိမ်းဖို့
အနာတရ လမ်းမ ရှည်ဝေးဝေးမှာ
ဘဝစားမြိန်ဝိုင်းလေး ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ပြင်ဆင်မထားနိုင်သေးတော့
ချစ်သူကို လက်ဆုံစားဖို့ လည်း မခေါ်ဝံ့ဘူး။
တစ်ကြိမ်သာ နီးရဖို့ အကြိမ်ကြိမ်လဲ ခွဲခွါ
ချစ်သူရဲ့ "ကတိ" တွေ မပါဘူး
ငါ့ရင်မြေလေး မွမွကြေ ထွန်ယက်ပြီး ပျိုးခဲ့...စိုက်ခဲ့။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 4:25 PM 1 comments
စင်ကာပူ တိုက်ခန်းတစ်ခုနားမှာပါ.............. ကျွန်တော် ကာစတမ်မာ ပြန်အလာကို စောင့်နေတုန်း တိုက်နားမှာ အမှိုက်ကား အမှိုက်လာသိမ်းတယ်...............
အမှတ်တမဲ့ကြည့်နေမိတယ်........... ကားထွက်သွားတော့ အမှိုက်ဂိုဒေါင်ရှေ့မှာ ထမင်းလုံးတွေ ပြန့်ကျဲကျန်ခဲ့တယ်...
စင်ကာပူမှာ ဒါမျိုးလဲ ရှိသေးတာပဲ တွေးနေတုန်း... ခိုတစ်အုပ် ပြုန်းဆိုရောက်လာရော............
မြင်ရခဲတဲ့ မြင်ကွင်းလိုဖြစ်နေတော့ ကြည့်နေမိတယ်............
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခို တစ်ကောင် ထပ် ဆင်းလာတယ်... ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က အကြီးဆုံးပဲ....
ရောက်လာတာနဲ့ ရှိသမျှခိုတွေကို ရန်ရှာတယ်...
သူက ပတ်ပီး လိုက်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ ခိုတွေက ပြေးဟယ်လွှားဟယ်နဲ့ တစ်လုံးတွေ့ တစ်လုံးကောက်စားသွားကြတယ်...
ဗလကြီးကတော့ လိုက်ထိုးဆိတ်ရင်း ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ထမင်းလုံးတွေ ကုန်နေခဲ့ပီ....
အသက်ကို ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ရှူရင်း ထမင်းကျန်ကို ပတ်ရှာနေတယ်....
ကျန်တဲ့ခိုတွေတော့ အေးအေးလူလူ ပျံထွက်သွားတယ်......
“အလိုကြီး အရနည်း” ဆိုတဲ့စကားလေး ခေါင်းထဲ တက်လာတယ်......
ရေးသားသူ- စိုင်း Time 7:54 PM 1 comments
အိမ်နဲ့ ဝေးတိုင်း အိမ်ကို တနည်းနည်းနဲ့ လွမ်းနေရတာ.........
ဒီနေ့မွေးနေ့မှာတော့ အမေချက်တဲ့ ဟင်းတွေ... အဖေချက်တဲ့ ဟင်းတွေ မထိမတွေ့ပဲ နေနေရတာ....
နောက်ဆုံးဗျာ.......... အသားဟင်းစားရင်တောင် အရိုးတွေကျန်ရင် အိမ်က ကြောင်လေး ခွေးလေးတွေကို သတိရတယ်...
ကိတ်မုန့်စားရင်လဲ မျက်လုံးဝိုင်းကြီးနဲ့ ကြည့်ပီး တောင်းစားတတ်တဲ့ ခွေးနက်မကြီး... (အခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး..)
အမေ့အသံကြားရင် ပြာနေတဲ့ ကြောင်တစ်အုပ်....
သူများအိမ်ကို ပေးလိုက်ပီး အိမ်မှာ ပြန်လာနေတဲ့ တစ်ကောင်တည်းသော ခွေးနက်ကလေး မဲလုံး.....
တွေးရင်း မျက်ရည်တွေလည်လာလို့ မွေးနေ့မှာ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် ချရေးဖြစ်တယ်....
သီချင်းစပ်ပီးတာနဲ့ အမေ့ကို ဖုန်းဆက်တယ်... စပီကာ ဖွင့်ခိုင်းပီးတော့ သီချင်းချက်ချင်း ဆိုပြဖြစ်တယ်....
ရေးသားသူ- စိုင်း Time 3:25 PM4comments
နှုန်းပြည့် ယုံကြည် မဆိုသော်ငြား
သောတ၌ဝယ် သကာပျား ။
ရနံ့ကားပြယ် ချိုရန်ခက်၏ ။
# ပုံ = ဂိုဂယ် က ယူပါတယ် ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 7:19 PM6comments
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 4:52 AM5comments
Sequence Shots 1
တစ်ခုခု ပေါ့ဗျာ။ လုပ်ကြည့်မိတာလေးတွေပါ။
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 5:21 PM3comments
မြင်နေကျ ငါ့မျက်လုံးတွေ ငတ်မွတ်ဖျားနာခဲ့ရပေါ့
နေသားမကျတဲ့ စိတ် က
ည ရဲ့အရေခွံကို ဆုတ်ဖြဲ ပြေးထွက်တယ်
ဒါဟာ ငါ့ရင်နဲ့တီးခတ်တဲ့ ဂီတပါ
နင့် ပြတင်းရဲ့ အပြင်ဘက် မနက်ခင်းမှာ
ငါ့ အလွမ်း တွေ လှလှပပ
မိုင်တိုင်တွေ စိတ်လိုလက်ရ ကွေးညွတ်ထားတဲ့ လေပြေထဲမှာ
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 6:52 AM5comments
" အပြစ် "
လမ်း အပြစ်လား ??
(သူ = ဘယ်သူလဲ ??)
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:24 PM 11 comments
"ဆန္ဒ" နှင့် "စိတ်လေထု "
ခုချိန်မှာ မိုးပေါ်က သကြားမင်းက ကြိုက်ရာ တဆုတောင်းဆိုရင်တော့ ကိုယ် "အိမ်ပြန်ပါရစေ" ဆိုတဲ့ "ဆု" ကိုပဲ တောင်းမယ်။
အိမ်ကို လွမ်းလွန်းလို့ပါ ။ မားတို့ကိုလည်း သိပ်သတိရတယ် ။
တော်ရာမှာ နေရတဲ့ ကာလရာသီတွေကလဲ သိပ်ရှည်ကြာနေပြီဆိုတော့ ပျော်ရာလေးမှာလဲ နေချင်သေးတယ် ။ အင်းး... ဖြစ်နိူင်ချေ မရှိသေးတဲ့ "ဆန္ဒ" တခုဆိုပါတော့ ။
လတ်တလော အခြေအနေက အဲ့ဒီ "ဆန္ဒ" တွေကို ကျောမခိုင်းထားချင်လဲ ကျောခိုင်းနေရတယ် ။ အိမ်ကိုပြန်ပြီး ပါးနဲ့မားရဲ့ အနားမှာ ချာဂျင်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေကလဲ ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်လွန်းလှတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တခါတခါ မာန်တင်းပြီး ကျောခိုင်းရလွန်းလို့ ထင်ပါတယ် ... အားတွေ အင်တွေ ကုန်ခမ်း ပြီး ဖျော့တော့တော့ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ် ။
ဘက်ထရီ ချာဂျင် သိပ်မသွင်းနိူင်လို့ အားကုန်ခါနီးတဲ့ အင်ဗာတာက မီးချောင်းလေးလိုပဲ။
ကိုယ့်ကိုတိုင်လဲ မလင်းနိူင်၊ သူများကိုလည်း အလင်းမပေးနိူင်တဲ့ လောင်ကျွမ်းခါနီး ခပ်မှိန်မှိန် မီးချောင်းလေး တချောင်းလိုဖြစ်နေတယ် ။
ကိုယ်ကတော့ ဘက်ထရီက "စိတ်"၊ မီးချောင်းလေးက"ကိုယ်" လို့တင်စားချင်တယ် ။ ဘက်ထရီအားပြည့်မှ မီးချောင်းလေးက လင်းနိူင်တာကိုးလေ ။ သူတို့က အတွဲလိုက်လေး နေတတ်တာမလား ။
အင်း...ဘက်ထရီတွေဟာ အားသွင်းဖို့ အချိန်လွန်ရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ ကိုယ်မသိပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် နှလုံးသားထဲက အကန့်တချို့ ပျက်ဖွယ်ရှိတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခက်တာက သကြားမင်းကလဲ မပေါ်လာဘူး ။
ဒီက ဆုတောင်းဖို့ အဆင်သင့် စောင့်နေပါတယ်ဆိုကာမှ .... ။
ကိုယ့် "ဆန္ဒ" တွေကို သူကလည်း လစ်လျှူရှုနေတယ် ။ ရက်စက်လိုက်ပုံများတော့ .. ။
သူကိုယ့်ကို သတိပြုမိစေဖို့ အချက်ပေး တန်ပို နဲနဲများ အရှိန်မြှင့်ဖို့ လိုနေသလား ??? ။
အင်း.....တမ်းသာတမ်းတ ကြည့်မိတာပါ ။
တောင်းတဲ့ဆုတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ခမျာလည်း လက်လည်ရှာမယ် မထင်ဘူး ။
သံတူကြောင်းကွဲပေမဲ့ ကိုယ်လို တောင်းဆုပြုကြမဲ့ သူတွေ များမှာသေချာလှသကိုးလေ... ။
အခုလို အရေမရ အဖတ်မရ "ဆန္ဒ" တွေကြောင့် ကိုယ့်"စိတ်"လေထုဟာ တော်တော်ညစ်ညမ်းနေတဲ့ပုံပဲ ။ဟိုးအဝေးက လှမ်းကြည့်ရင်တောင် မည်းလို့မှောင်လို့ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ တားထားသလား ။ တစုံတယောက် ကပဲ ကိုယ့်အတွက် ပြန်လမ်း ကိုပိတ်ထားသလား ???
မရေရာတဲ့ အဖြေ တခုရယ် ၊ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ မဖြစ်နိူင်သေးတဲ့ အိမ်ပြန်ပြီး အားဖြည့်ချင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အရေမရ အဖတ်မရ "ဆန္ဒ"
တခုရယ် .. အဲ့ဒီ ၂ခုအောက်မှာ ကိုယ်ခုလိုပဲ မကြာမကြာ ပိ ၊ ပိ နေတတ်တယ် ။
တခါတခါ ကိုယ် အသက်ရှု တောင် သိပ်မဝချင်တော့ဘူး ။
ဟူးးးးးးးး...သူ့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကိုယ့်မှာ "တက်ကနိူလော်ဂျီ" တခုလိုနေတာတော့ သေချာနေပြီဆိုပေမဲ့လည်း လောလောဆယ် ကိုယ် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့၊ ရွေးချယ်နိူင်တဲ့ "တက်ကနိူလော်ဂျီ" က အနာဂတ်ရဲ့ "ပျော်ရာ" ဆိုတဲ့ နေရာအတွက် "တော်ရာ" ဆိုတဲ့ ခုဒေသမှာ အဲ့ဒီ "ဆန္ဒ" တွေ ခဏခေါက်ပြီး သိမ်းထားယုံပဲ ဆိုတော့ ......... ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 9:42 PM 8 comments
ကြာ..မီးမီးလေးနားကိုစာမရေးတာကြာပြီနော်။ တကယ်ကတော့ အမြဲတမ်းလိုလို သတိရနေပါတယ် မီးမီးလေးစာလိုက်နိူင်ရဲ့လား၊အဆင်ပြေပါ့မလား၊နေကောကောင်းရဲ့လား၊အစုံပေါ့။မီးမီးလေးမွေးနေ့တုန်းက ကြာတို့ ဖုန်းဆက်ကြသေးတယ် ။ ဖုန်းက ဘယ်လိုမှကို ခေါ်လို့မရဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းတွေ မီးမီးတို့အဆောင်ကိုဖုန်းခေါ်ရတာ သိပ်ခက်တာပဲ။ မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းခေါ်ရတာမလွယ်ဘူးမီးမီးရေ။ ဈေးကလည်းကြီးသေး၊လိုင်းကလည်းမကောင်းဘူး ။မီးမီးလေးတို့က အဆောင်ဆိုတော့ပိုခေါ်ရခက်တာပေါ့။ ကြာ ဒီစာကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရိုက်ပြီးရေးလိုက်တာ။ လက်နဲ့ရေးတာလဲကောင်းပေမဲ့ မှားရင်ပြင်ရပြူရ စက်နဲ့ရေးတာ ပိုမြန်သလားလို့။ မီးမီးလေးဆယ်တန်းပြီးရင် အင်္ဂလိပ်စာကို သေချာ ကောင်းကောင်း ပြောနိူင် ဆိုနိူင်အောင် သင်တန်းတွေ တက်ရမယ်။ ပြီးရင်ကွန်ပျူတာ..ဒီခေတ်ထဲမှာ ကိုယ့်သင်ယူလေ့လာမဲ့ဘာသာရပ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုင်တီနည်းပညာကို အနည်းဆုံး အခြေခံပဲဖြစ်ဖြစ် သိကိုသိထားရမယ် ။အဲ့ဒါဟာ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တခုပေါ့ ။
ကြာ..ဒီတခေါက် မီးမီးလေးကို စစ်ပွဲတွေအကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ ကြာတို့နေတဲ့ ခုကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာအရပ်ရပ်မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတာ မနည်းဘူး ။ကြာတို့နိူင်ငံထဲမှာကိုပဲ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ ဆို ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေ ပစ်နေခတ်နေကြတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ဘူးမှာပေါ့။ အဲ့ဒါတွေ တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ မနည်းဘူးမီးမီးလေးရေ။ ကြာတို့ နိူင်ငံရဲ့ အနီးအနားက နိူင်ငံတွေ အိန္ဒိယမှာ၊ပါကစ်စတန်မှာ၊ထိုင်းမှာ၊ဟိုး..အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းက နိူင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေလိုက်ကြတဲ့စစ်တွေ။ သူတို့တွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြသလဲ ။ အဓိကအချက်ကတော့ လူနည်းစု လူမျိုးတွေက သူတို့ရဲ့ မျိုးနွယ်ကို ထိန်းသိမ်းချင်တယ်၊ အဲ့အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေ ရချင်တယ်။ အစိုးရလက်အောက်မှာ မနေလိုဘူး။ ကိုယ့်နယ်မြေကို သီးသန့်အုပ်ချုပ်ချင်ကြတယ်။ နောက်တချက်က အစိုးရရဲ့ တရားမျှတတဲ့ အာဏာပေးဝေမှု တနည်းအားဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့။အဲ့ဒီအချက်က စစ်တွေကို ဖြစ်ပွားစေဖို့ အတွက် လောင်စာတမျိုးပေါ့။ တနှစ်တနှစ် စစ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေ သောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီး သေကြတယ်။
ကြာတို့ တိုင်းပြည်ကလည်း သိပ်အကောင်းစား အငြိမ်းချမ်းဆုံးဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ မပါပေမဲ့ နဲနဲတော့တော်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါပေမဲ့နော်..စစ်ဆိုကတည်းက မကောင်းတော့ဘူးလေ နိူင်သူကောရှုံးသူကော သေကြတာကိုး။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အထိအနာဆုံးက ကလေးလေးတွေပေါ့။ မိသားစုတွေ သေကုန်ကြတယ် တယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ် မောင်နှမ၂ယောက်၃ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ် ။ အဲ့လိုကလေးလေးတွေဟာ ကျောင်းနေရွယ်မှာ ကျောင်းမနေနိူင် ၊ စားကောင်းခြင်းနေကောင်းခြင်း မနေနိူင်။ လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ အလေအလွင့်လေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော..။နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် စစ်ကြောင့် လွတ်ရာကိုပြေးကြတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ နိူင်ငံတွေဘက်ဆီကို ကူးကြတယ်ပေါ့ ။ဥပမာ..ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ဆို မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဘက်မလား အဲ့တော့ ထိုင်းနဲ့နီးတော့ ထိုင်းဘက်ကိုပြေးကြတယ်။ တဘက်နိူင်ငံကလည်း သူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကလည်း ရှိသေးတာဆိုတော့ ပြေးလာသမျှစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို မကြည့်ရှုနိူင်ဘူးပေါ့ ။ နေရာထိုင်ခင်းမလုံမလောက် ၊အစာရေစာမရှိ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးမရှိ ၊ကလေးလေးတွေအတွက် ကျောင်းမရှိ… ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်သလဲ ။
ဒါတောင်နော် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နိူင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့နေကြတာ။ ဒါပေမဲ့ ပေးမဲ့သူနဲ့ယူမဲ့သူ အင်အားမမျှဘူးလေ။ တချို့တွေကတော့ တတိယနိူင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေမဟုတ်တဲ့၊ အခုလက်ရှိခိုလှုံနေတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ထွက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရကြတယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့လည်း လူနည်းစုပေါ့လေ။ အများစုကတော့ အဲ့ဒီဒုက္ခတောကြီးထဲမှာပဲ မွေး၊အဲ့ဒီမှာပဲကြီး၊အဲ့ဒီမှာပဲသေပေါ့။ မီးမီးလေးကြားဖူးမလား မသိဘူး ပါလက်စတိုင်း နဲ့အစ်စရေးစစ်ပွဲတွေအကြောင်းလေ။ ကြာဖြင့်လေ အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေ အကြောင်းစလေ့လာစတုန်းက ဘာကြောင့်များ အဲ့ဒီစစ်ဆိုတာကြီးကို ဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတာ နားကိုမလည်ဘူး။ စစ်ဆိုတာ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရငတာ့ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုကို ညီမျှစွာ ခွဲဝေမပေးနိူင်လို့ တဦးတည်း မူပိုင်စီးချင်လို့ ဖြစ်ရတာကစတာပဲ ။ လူသားတွေရဲ့ လောဘများကြောက်စရာကောင်းလိုက်ပုံများ ပြောပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ အစဉ်းစားတတ်ဆုံး အတွေးအခေါ်ဆင်ခြင်ဥာဏ် အရှိဆုံးသတ္တဝါဟာ လူသားတွေတဲ့ … ကဲ အဲ့လိုဆို အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို ကြည့်ရင် အဲ့ဒီ လူသားဆိုင်ရာဖွင့်ဆိုချက်ဟာ မှန်တယ်လို့ပြောနိူင်ပါ့မလား။ စဉ်းစားစရာပဲနော် ။ အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲဆိုတာ ကြာတို့ငယ်ငယ်လေးကတည်း ဖြစ်နေတာ ခုထိလဲမပြီးသေးဘူး နယ်မြေလုတာကနေစတယ်လို့ မီးမီးလေးနားလည်အောင် အလွယ်ပြောရမှာပေါ့ ။ ဗုံးတွေကျည်ဆံတွေကြားမှာပဲ ကြီးပြီးလာကြလို့လားမသိပါဘူး။ အားလုံးကသွေးဆာနေကြတယ်။ သူကချလိုက် ကိုယ်ကချလိုက်နဲ့ ရန်ကိုရန်နဲ့တုံ့ပြန်တော့ မဆုံးတော့ဘူးပေါ့လေ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကြာတို့ မြတ်စွာဘုရားက “ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံ့နှင်းမှ ရန်ကင်းပြေပျောက် ချစ်ခြင်းရောက်၏” လို့ဟောတော်မူခဲ့တာပေါ့။
အဲ့လိုပဲမီးမီးလေးရေ.. စစ်ပွဲအကြီးကြီးတွေမှ မဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေချင်း မောင်နှမသားချင်းလဲ တူတူပေါ့။ အကြောင်းအရာတခု မျှတမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားလာရရင် အဲ့ဒါကို အကြောင်းပြုပြီး တယောက်နဲ့ စိတ်ခုကြရင်းက ရန်တွေဆောင်ကြ ၊ တဦးကိုတဦးမကောင်းကြံကြ…အဲ့ဒါတွေဟာ စစ်ပွဲသေးသေးလေးတွေပေါ့။ ကြာ..ကလေ သိပ်ဒေါသကြီးတာ။ အဲ့ဒါဟာ စစ်ပွဲလေးတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ မီးစာပေါ့။ ခုတော့ တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်နိူင်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ စစ်ပွဲလေးတွေလဲ မဖြစ်ရအောင် ဖြစ်ပြီးခဲ့ရင်လည်း ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံးနှင်းမိအောင် ခွင့်လဲခွင့်လွတ်နိူင်အောင်ပေါ့။ မဖြစ်အောင်နေနိူင်ဖို့ ပိုကြိုးစားရအုန်းမယ် ။ မီးမီးလေးကိုလဲ ကြာက ဒေါသမီးစာတွေမရှိစေချင်ဘူး။ အဲ့ဒီမီးစာက ဆင်ခြင်တုံတရားတွေကို ကွယ်ပျောက်သွားစေတယ်။ ဂမူးရူးထိုးနဲ့ လုပ်သင့်တာမလုပ်သင့်တာကို မခွဲခြားတတ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ မီးမီးရေ…ကြာကလေ မီးမီးလေးကို စာတွေလည်းသိပ်ဖတ်စေချင်တာ။ ပြီးတော့ အသိအဥာဏ်ပညာလည်း သိပ်ကြီးမြင့်စေချင်တာပဲ ။ အရာရာကို စနစ်တကျ တွေးတတ်ခေါ်တတ် လေ့လာသုံးသပ်တတ်တဲ့ ညီမလေးသိပ်ဖြစ်စေချင်တာ။ နောက်ပြီး ကျေးဇူးတရားကိုလည်း သိတတ်စေချင်သေးတယ်။ လောကကြီးမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ သူအားလုံးဟာ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီနဲ့ နေထိုင်နေကြတာ။ ကိုယ်မမြင်မသိနိူင်တဲ့ အပိုင်းတွေကနေ ကိုယ့်တို့ဘဝတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် ။ မီးမီးလေးတွေးကြည့်စမ်း …ဥပမာ ထမင်းစားတယ်ဆိုပါတော့ အဲ့ဒီဆန်ကိုစိုက်ပေးတဲ့ ဦးကြီးတွေရှိမှ ၊ပြီးတော့ အဲ့ဒီဆန်ကိုထမင်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရှိမှ ၊ဟင်းဆိုလဲ အဲ့လိုပဲ။ မြင်အောင်ကြည့်တတ်ရင် အများကြီးပေါ့ ။ ဒီတခါထမင်းစားတဲ့ အခါ အဲ့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းကို ကိုယ့်ရှေ့မှာ အရန်သင့်စားလို့ရအောင် လုပ်ကိုင်ပေးကြတဲ့သူတွေကို စိတ်နဲ့မှန်းပြီးမေတ္တာလေးများ ပို့ကြည့်စမ်းပါ။ အဲ့ဒီအချိန် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဆိုတာကိုလဲ သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်စမ်းပါ။ ပိုက်ဆံပေးရင်ရတာပဲလို့ လွယ်လွယ်နဲ့ပေါ့ပေါ့လေး မတွေးနဲ့နော် ။ အားလုံးမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာရှိကြတယ် မီးမီးလေးရဲ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကြာက အရာရာကို တန်ဖိုးထားပြီး ကျေးဇူးတရားကို ခံစားတတ်တဲ့သူလည်း ဖြစ်စေချင်သေးတာ။
မီးမီးရေ..မီးမီးကိုကြာကပြောပြချင်တာတွေ၊ သိစေချင်တာတွေ အများမှအများကြီးပဲ ။ ကြာပြန်လာရင် မီးမီးကို အနီးကပ်သေချာ လုပ်ပေးနိူင်တော့မှာပါ။ ကြာပြန်လာဖို့လဲ စိတ်ကူးထားတယ် ။ ဒီနိူင်ငံမှာ ပိုက်ဆံရမဲ့ အလုပ်တခုတော့ လုပ်ရင်ရနိူင်ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ကြာက ကြာတတ်တဲ့ပညာနဲ့ ကြာတို့ နိူင်ငံအတွက် တခုခုလုပ်ချင်တယ် ။ ကြာလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်မလုပ်ရရင်တောင် လူတွေကို အထောက်အကူပြုမဲ့ အလုပ်တခုခုလုပ်မယ် စိတ်ကူးတယ် ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်ချည်းပဲ စဉ်းစားနေရင် သိပ်အထီးကျန်ဆန်တယ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒါဟာ လူမပီသဘူးမီးမီးလေးရဲ့..။ ကိုယ်တတ်နိူင်သလောက် အများကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ရမယ်။ သယ်ပိုးနိူင်အောင်လဲ အားထုတ်ရမယ် ။ ဘာမှမတတ်နိူင်ရင်တောင် ကိုယ့်ကြောင့် အနည်းဆုံး ကိုယ့်အနီးအနားကလူတွေ စိတ်ချမ်းသာသွားစေတာမျိုး၊ ပျော်ရွှင်စေတာမျိုးလောက်တော့ လုပ်ဆောင်နိူင်ရမှာပေါ့ ။ မီးမီးလေးရေ…ဒီတခေါက်ရေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက သိပ်များလေးနက်သွားလေသလား ။ ဒါပေမဲ့ မီးမီးလေးကို နားလည်စေချင်တယ် ။ သေချာဖတ်နော် ။
ကြာချစ်တဲ့ ညီမလေး နေကောင်းကျန်းမာပါစေ ။ စာတွေလည်း စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါကြိုးစားနိူင်ပါစေ ။ စိတ်လက်အမြဲကြည်ရွှင်နေပါစေ ။ ပါးတို့မားတို့ကိုလည်း အမြဲသတိတရရှိနေပါစေ ။ မနောဖြူ သဘောဖြူနဲ့ လူချစ်လူခင်ပေါများပါစေ မီးမီးရေ…
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 4:43 PM4comments
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ ပြန့်ကျဲ...
အဲဒီ အတွင်းကျကျ စားပွဲလေးမှာ...
သူမပါတဲ့ မနက်ဖြန်တွေ ချခင်း....
လေးဘက်လေးတန် ဘောင်ခတ် အခန်းကျဉ်းထဲ
အခုထိတော့ ငါလဲကျနေတုန်း....။ ။
ရေးသားသူ- Anonymous Time 1:08 PM0comments
ကမ္ဘာ့ ဖလားအတွက် LIVE Streaming
ကမ္ဘာ့ဖလား ကို အွန်လိုင်းက ရှာကြံကြည့်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ကျွန်တော် ကြည့်နေတဲ့ Live Streaming ဆိုက်လေး တစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်...။ ကြည့်ရတာအတော်လေးလဲ အဆင်ပြေပြီး ကြည်ကြည်လင်လင်လဲ ရှိပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင် အတန်အသင့်ရှိရုံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လင့်ခ် ကတော့ ဒီမှာပါ။
ဒါရိုက်လင့်ခ် တွေကို ပွဲစ ခါနီး ဆယ့်ငါး မိနစ်အလိုလောက်မှ ပေးပါတယ်..။ သူ့ဆိုက်မှာ တင်ထားတဲ့ ပလေယာကနေလဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို...သူပေးထားတဲ့ လင့်ခ် တွေ ကနေလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လင့်ခ်တွေကိုလဲ အမြဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကြည့်နေရင်း တစ်ခါတစ်လေလိုင်းပျောက်သွားရင် လင့်ခ်ပြောင်းပြီး ကြည့်နိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား..။
*ကျွန်တော့်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားရောဂါကို ဒီလင့်ခ်နဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ ဘော်ဒါကြီး စိုးငွေကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း *
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 1:05 PM 1 comments
မုတ်သုန် စိတ်ကူးတွေ တသုန်သုန် ခတ်ပြီး
ငတ်မွတ် ဖျားနာနေတဲ့ ကောင်ပါ
ဟောဒီ လက်ထဲက ရက်စွဲဟာ
ကောင်းကင်ရဲ့ ဂီတနဲ့အတူ ပွင့်တယ်
စွတ်စို ခွင့် ဘယ်ဆီမှာလည်း....?
ယောင်ယမ်းသံ ဆူညံတဲ့ နေ့ပါ
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 12:17 PM6comments
ဟန်ချက်ညီညီ စီချယ်ထားတဲ့ ငါ့ရဲ့ည....
ဟိုးအနောက်ယွန်းယွန်းဆီက ထုပ်ပိုးခြင်းမဲ့ ဆာလောင်မှုတွေ....
မှောင်ရီနေတာတောင် အလင်းကို သက်သေထူတုန်း...
အဲဒီမနက်မျိုးမှာ ငါ့ကို ဘယ်သူနိုးခဲ့တာလဲ.....?
ရေးသားသူ- Anonymous Time 5:47 PM2comments
နားတစ်စုံ စာ စကားတွေ
ခေါက်ရိုးကျိုး မျက်လုံးတွေ မြည်တမ်းခဲ့
ပင့်သက် တို့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခဲ့ကြ
ပျိုးထားတဲ့ ငါ့ ကောင်းကင်လည်း
ငါ့ အခန်းထဲ တနင့် တပိုး....
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 2:20 PM2comments
တိုးတိတ်ညင်သာလွန်းတဲ့ ရင်ခုန်သံပါးပါးလေးကြားမှာ အချစ်ရော်ရွက်လေးကြွေကျ.........
ကောက်ယူသိမ်းဆည်းလိုက်ဖို့ ငါလက်တွေ လှမ်းလိုက်တယ်........
နှင်းစက်တွေ စိုနေသတဲ့လား ရွက်ဝါရယ်...........
သဲ့သဲ့လေး လှုပ်ရှားယုံနဲ့ နင်ဘာလို့ ခုန်ချခဲ့တာလဲ.................
ရင့်ကျက်နေတဲ့ ဒဏ်တွေနဲ့ အဝါရောင်ငယ် မဟာဆန်ချိန်မှ နင်မြေခရက်တယ်နော်............
စိမ်းစိုဝေဖြာဖူးတဲ့ အခက်အလက်တွေ . ကောင်းကင်ကို မျှော်ကြည့်ကြေကွဲ...........
မြေနီရောင် ခြောက်သယောင်းမှာ နင်ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းလိုက်ချိန်....
ဘယ်ဘက် ရင်အုံက ပါးပါးဆိုတယ် မျက်ရည်ခြွေ စွေတဲ့မိုးတဲ့လားကွယ်.....
ပင့်သက်ရှိုက် ခေါင်းမော့လိုက်ချိန်မှာ ငါ့မျက်ရည်တွေ ခုန် ချ လိမ့် ဆင်း...........
ရေးသားသူ- Anonymous Time 8:05 PM4comments
ပင့်သက်တွေ မြို မြို ချထားရတယ်
ရေးသားသူ- ကူးလွေ့ Time 2:52 PM3comments
ဒီနေ့ အစီအစဉ် မရှိဘဲနဲ့ ဒိုးလုံးသီချင်းတွေ အများကြီး နားထောင် ဖြစ်တယ် ။
"သောက" ဆိုတဲ့ ခုသီချင်းကို ဒိုးလုံး ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်း မသိခင် ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုပြလို့ နားထောင်ခဲ့ဘူးတယ် ။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ တယောက် တနေရာစီ ကွဲကွာကုန်ကြကတည်းက ပြန်မတွေ့ကြတော့တာ ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်လွန်တော့မယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရမိတဲ့ အတွက် အမှတ်တရပေါ့ ......... ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 9:24 PM3comments
ဆုံမှတ်တွေက ထက်ဝက်မက လွန်နေခဲ့သမို့....
ထွက်သက်လေးကို မှန်းမျှော် ကြည်နူးရင်း....
ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ ယဉ်ယဉ်လေး ရူးခဲ့ပေါ့.....
စိမ်းလန်းဖူးတဲ့ နေ့တွေ အကြောင်းမှာ...
လောင်းရိပ်မှာ တွယ်က ညိုးမယ့်အစား...
ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ခေါက်သိမ်းလိုက်တယ် ကလေးရေ...
ရေးသားသူ- Anonymous Time 7:02 PM 1 comments
အရောင်လှတိုင်း ရောင်းလို့ မလောက်ဘူးတဲ့လား....
တမင်မဟုတ်သလို သက်သက်လဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး....
ငါ့နောက်ကျောမှာ ဓါးကို မြင်တယ်.....
သုံညကအစမှာ တစ်မှ မရှိသေးပဲ....
နင်ရွာတဲ့မိုးမှာ နင်ကိုယ်တိုင် မနစ်မွန်းစေနဲ့
နင့်ကို ငါ ဦးညွှတ်ထားတယ်.....။
ရေးသားသူ- Anonymous Time 4:49 PM0comments
စက္ကန့်ပိုင်းလေးထိကို စကားသံတွေ ချိုလွန်းသေးတယ်...
ကျေးငှက်တွေ သာနေလဲ ငါ့ရင်နာနေတယ်...................။ ။
ရေးသားသူ- Anonymous Time 8:35 PM0comments
ရေကျချိန်မှာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျပီး ကမ်းကို ကပ်မိဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်လို ဘဝဟာ သံယောဇဉ်ပင်လယ်ပြင်မှာ ယောင်ချာချာ....
သက်သေလှိုင်းတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး လှိုင်လှိုင်တက်သာ သွားတယ်... ခန္ဓာကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပြန်ဆွဲချ...
လုံးချာပဲလိုက်နေတာလား.. ပြေးသူနဲ့ ပုန်းသူ၊ လိုက်သူနဲ့ ရှာသူ...။ တွေ့နေပေမယ့် မြင်ဖို့ခဲသလိုပဲ...
ဒူးထောက်လက်မြောက်ထားရင်း မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့စောင့်နေတယ်...
ရလဒ်မကောင်းမှာ ကြိုသိထားတဲ့ အလုပ်ဝင်အင်တာဗျူးလိုမျိုး.. ကံတရားကို မျက်နှာချိုသွေးဖို့ စိတ်ကို မြေမှာ ဝပ်ဆင်း ပြင်ဆင်....
လေပြင်းတွေ တိုက်ခဲ့တာလား.. လေညှင်းတွေ လာမယ်လို့ အချက်ပြတာလား.. မှတ်ထင်သိရှိနေတာတော့ ပင်လယ်ဟာ မုန်တိုင်းထန်လွန်းတယ်....
တစ်ဘက်စောင်းနင်း မှတ်ချက်တွေနဲ့ သိတတ်မှုတွေ သိမ်ငယ်လွန်းပေမယ့် မှတ်ကျောက်တင် သံယောဇဉ် အဖြူရောင်ထဲမှာ ဒူးထောက်ကာ တိုက်ပွဲဝင်ရဦးမယ်...
မှန်သောစကားကို သစ္စာလို ဆိုရင်း အချိန်တန်ရင် ကောင်းကင်မှာ လမင်း ထွန်းပါစေလို့ မျက်ရည်ကြည်လေးနဲ့ ထွန်းငြိလိုက်တယ်......
ရောက်ခဲလှတဲ့ ကမ်းခြေမှာ ပန်းတွေ လှိုင်မွှေးစေတော့.....
ရေးသားသူ- Anonymous Time 6:50 PM0comments
ကိုယ်လိုချင်တာကို ပုံစံဖော်ဖို့ သုံးနှုံးပြောဆိုကြတယ်.... ဘာသာစကားတွေ ဘယ်လောက်ကွဲကွဲ အဓိပ္ပာယ်ကို သယ်ဆောင်နေတာပါပဲ.....
ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေကြတာ.. နည်းမျိုးစုံ.........။ စာရေးသလို၊ ပြောလဲ ပြောရဲ့....။
ကြားထဲမှာ သယ်ဆောင်ပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ လက်ခံနားလည်မှုလေး ချိတ်ဆက်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်.........
အထင်လေးတစ်ချက် လွဲစေခြင်းဟာ တော်တော် ဆိုးဝါးတဲ့ ဆက်သွယ်မှု ကန့်လန့်ကာကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ...
စေတနာတွေ လွန်သွားရင် ရေစီးကမ်းပြိုစကားတွေဟာ ကမောက်ကမ သံစဉ်တစ်ခုလို အဓိပ္ပာယ်တွေက ဝိရောဓိ...
ရှင်းရတာလွယ်ပေမယ့် စွဲမှတ်သွားတာက နှုတ်ရခက်တဲ့ သညာ............
သွားမယ် မသွားဘူး နှစ်ခွန်းထဲမှာ ပဲ အဓိပ္ပာယ်တွေ ကိန်းအောင်းနေလိုက်တာ....
သွားမယ် ပီးမှာ မသွားတော့ဘူး ပြောလိုက်တာဟာ.... အကြောင်းတွေ တစ်စုံတစ်ရာ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် စိတ်ဆိုးတာလို အဓိပ္ပာယ်မျိုး သယ်ဆောင်တယ်...။
တစ်ခါတစ်ရံ သိတတ်နားလည်မှုကို သယ်ဆောင်တယ်...။ ဖတ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပီး ကွဲတာပေါ့...
နားတော့ ရှုပ်စရာ... ။ ဥပမာ... အခန်းထဲက ငါသွားတော့မယ် လို့ နှုတ်ဆက် အထွက်မှာ သွားတော့လို့အပြောနဲ့ကြုံမယ်...။ မသွားတော့ဘူးလို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပါပီတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေက ပေါက်ကရ ဖြစ်ကုန်ရော...။
တစ် သွားခါနီးမှာ သွားတော့လို့ အပြောခံလိုက်ရလို့ စိတ်ဆိုးပီး မသွားတော့ဘူးလို့ ရွဲ့တာလား...
နှစ် သွားခါနီးမှာ သွားတော့လို့ကြားလိုက်တာ မသွားစေချင်သေးဘူး ခံစားမိပီး စေတနာနဲ့ အလိုက်သိတတ်စွာ မသွားတော့ဘူးလို့ ပြင်ဆင်ခြင်းမျိုးလား...။
သုံး ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်မပြတ်သားတာမျိုးလား...
လေး သွားချင်စိတ် ကုန်တာလား..
လားပေါင်းများစွာ.... အဲဒါ စကားလေး သုံးခွန်းထဲက သယ်သွားတဲ့ ပြဿနာ....
အင်း ကာလံဒေသံကို လိုက်လို့ သုံးနှုံး တတ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့လေ....
စကားဟာ တိုတိုင်းမကောင်းဘူး... ရှည်တိုင်းလဲ အကြောင်းမထူးတဲ့....
အင်း ဒီကလေး စကားတတ်လိုက်တာတဲ့.. တစ်ကယ်ကော တတ်ရဲ့လား.........
စကား .. စကား.. စကား....
ရေးသားသူ- Anonymous Time 8:02 PM6comments
ကြောက်စိတ် ၊ နှမ်းစေ့လေး နှင့် အတွေးတစ
“နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ အဖိုးတန်ဆုံး သယံဇာတဟာ ရေနံမဟုတ်ပါဘူး။ သစ်တော မဟုတ်ပါဘူး။ တွင်းထွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေပါ” တဲ့ … ကိုယ် ဆရာမောင်သစ်စင်း ရေးတဲ့ “ကြောက်စိတ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်မိတယ်။ ဟုတ်မှာပါ။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ကလည်း ဆရာတွေ ခဏခဏ ပြောခဲ့ဖူးတယ် မင်းတို့ဟာ အနာဂတ်တိုင်းပြည် ရဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ “ကလေး” ဆိုတာ နောင်တချိန် “လူကြီး” ဖြစ်လာမဲ့သူ ၊ နဲနဲပိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေး ပြောရရင်တော့ “တိုင်းပြည် ရဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ အနာဂတ် ရဲ့ သူရဲကောင်းလေး” တွေပေါ့။ ဒါတွေကို မသိတဲ့သူ ၊ မနားလည်တဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးလို့ ကိုယ်ထင်ပါတယ် ။ စဉ်းစား တွေးခေါ် တတ်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိတဲ့ သူသာ မှန်ရင်ပေါ့ ။
ဒါပေမဲ့လေ … ကိုယ်တို့ နေတဲ့ ဟောဒီ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကလေးလေးတွေကို တန်ဖိုး မထားကြတဲ့ နေရာတွေ ၊ အသိအဥာဏ် ကြီးလှပါချည့်ရဲ့ ဆိုတဲ့ လူကြီးကြီးတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက် ၊ လူညွှန့်တုံးရတဲ့ ကလေးလေးတွေ အများမှ အများကြီးပါ ။ အဲ့ဒါကို ကိုယ် ပညာရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းလေးကနေပဲ စဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဥာဏ်မီသလောက်ပေါ့။ လူချင်းတူတာတောင် ဘဝတွေ မတူတဲ့ ကလေးလေးတွေကို မြင်ရရင် ကိုယ်ဝမ်းနည်းသလိုလိုကြီး အမြဲခံစားရတယ်။
ကိုယ်ဖတ်မိသလောက် ယူနက်စကိုက ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက် တချို့အရ ကိုယ်တို့နေတဲ့ ဟောဒီ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ကျောင်းမနေနိူင်တဲ့ ကလေးအရေအတွက်ပေါင်း သိန်းပေါင်း ၇၂၀ ရှိသတဲ့။ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေး ၄ယောက်မှာ ၁ယောက်က ကျောင်းမနေနိူင်ဘူးလို့ ပြောရင် အဲ့ဒီသိန်း၇၂၀ဆိုတဲ့ အရေအတွက်ဟာ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာ ပိုပြီးမြင်လွယ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သေစာရှင်စာတောင် မတတ်တဲ့ အဲ့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ ဘဝ ၊ အဲ့လို ကလေးလေးတွေ များများလာမဲ့ တိုင်းပြည် တပြည် ရဲ့ အနာဂတ် ၊ ဘာတွေများ မျှော်လင့်လို့ ရနိူင်သလဲ ?? ဘာတွေများ သေချာရေရာသလဲ ?? ။ မသေချာတာတွေထဲက အသေချာဆုံးတခုကတော့… အကောင်းဆုံးတွေကို သူတို့တွေဘယ်တော့မှ မပိုင်ဆိုင်နိူင်ဘူး ဆိုတာပဲ။
ဟုတ်တယ်လေ .. သေစာရှင်စာလေးမှ မတတ်တဲ့ အဲ့ဒီကလေးလေးတွေဟာ သူတို့ဘဝ တက်လမ်း အတွက် ဘယ်လောက်ထိများ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ကြမလဲ။ သူတို့တွေ ဘဝအတွက် ဘယ်လို ရပ်တည် ရှင်သန်နေကြသလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တို့တွေလဲ မြင်နေတွေ့နေကြရတာပါပဲလေ။ အခြေအနေမပေးတဲ့ ကလေးတွေကတော့ လမ်းဘေးမှာ တောင်းရမ်းစားသောက်မယ် ၊ အမှိုက်ကောက်မယ်။ အဲ့ထက် အခြေအနေဆိုးရင်တော့ ခိုးမယ်ဖွက်မယ်။ ဟော…နဲနဲလုပ်ရည်ကိုင်ရည် ရှိတဲ့ ကလေးဆိုရင်တော့ အရွယ်နဲ့မမျှအောင် ကြမ်းတမ်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မတန်တဆ ရတဲ့ လုပ်ခလေးနဲ့ အလုပ်ကြမ်းတွေ လုပ်ကြတယ်၊ အဲ့ထက် နဲနဲအဆင့်မြင့်ရင်တော့ သူများအိမ်မှာ အိမ်ဖော် လုပ်တာမျိုး၊ လ္ဘက်ရည် ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးတာမျိုးတွေ လုပ်ကြတယ်။ သူတို့တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘဝခရီးလမ်းတွေ ဘယ်လောက်များ ကြမ်းတမ်းလိုက်သလဲ ။
အသိပညာ နှုံ့နဲ့ကြတော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိူင်ဘူး ။ အလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိူင်တော့ ဝင်ငွေလဲမဖြောင့်တော့ဘူးပေါ့ ။ ရသလောက် ဝင်ငွေလေးနဲ့ ရပ်တည်နေရတော့ တခြားလှုမှုရေး ၊စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အစရှိတဲ့ လူတယောက် အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတာမှာပါ ချို့ယွင်းကုန်ကြရော ။ သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေကျကော … မရှိ ၊ မရှိလို့ အခြေခံ ပညာတောင် မသင်ကြားနိူင် ၊ ပညာမရှိတော့ အလုပ်က အဆင်မပြေ၊ အလုပ်မဆင်မပြေတော့ ဝင်ငွေမရှိ၊ ဝင်ငွေမရှိတော့ ….အဲ့လိုနဲ့ပဲ လုံးလည်လိုက်နေပြန်ရော ။ အဲ့ဒါကို “Vicious circle of Poverty” “ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဆင်းရဲခြင်း စက်ဝန်း”လို့ ခေါ်သတဲ့ ။ အဲ့ဒီ စက်ဝန်းကြီးထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ဘဝတွေ ကိုယ်တို့မြန်မာပြည်မှာကော ဘယ်လောက်များ များနေပြီလဲ ။ အတွေးနဲ့တင်တောင် ကိုယ့်မှာ မသက်မသာမို့ သက်ပြင်းအရှည်ကြီး တချက် ခပ်မောမောပဲ ချလိုက်မိတယ် ။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာ “အခြေခံပညာရေးသင်ယူနိူင်ရေး”ဟာ တခုအပါအဝင်ပေါ့ ။ မှန်ပါတယ် ။ အရွယ်ရောက်တဲ့ ကလေးတိုင်းဟာ အနဲဆုံး အခြေခံပညာ အဆင့်ထိတော့ သင်ကြားထားသင့်တယ်လို့ ကိုယ်လဲ ထင်မိတယ် ။ ဘာမှမသိ ဘာမှမတတ်တဲ့သူနဲ့စာရင် ရေးတတ်ဖတ်တတ်၊ အနည်းငယ် စဉ်းစား ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ သူဟာ အနည်းဆုံး လူလိမ်မခံရအောင်လောက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိူင်တယ်လေ။ စဉ်းစား ဆင်ခြင်နိူင်တယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိူင်ငံတွေမှာတောင် အရွယ်ရောက်သူ ကလေးတိုင်း “အခြေခံပညာသင်ယူရေး” ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ နိူင်ငံတော်ရဲ့ စီမံချက်တခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားသေးတာပဲလေ။ ကိုယ်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ .. ဟင့်အင်း .. မဟုတ်သေးပါဘူး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကောက်ကျနေတဲ့ နိူင်ငံ .. အင်း… အဲ့လို ပြောရင်ပိုမှန်မယ် ။ အဲ့လိုနိူင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရအုန်းမယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းဆန်နိူင်တဲ့ အမှန်တရားပါ ။ သို့သော်ငြားလည်း…သို့သော်ငြားလည်း…ပေါ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်အစောပိုင်းမှာ “အသိအဥာဏ် ကြီးလှပါချည့်ရဲ့ ဆိုတဲ့ လူကြီးကြီးတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက် ၊ လူညွှန့်တုံးရတဲ့ ကလေးလေးတွေ အများမှ အများကြီးပါ” လို့ ပြောမိတာ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် မျက်စိစုံမိတ်နေသူများကို ဘာမှမပြော လိုပါဘူး ။ ပြောလဲ မထိရောက်ဘူးလေ။ အဲ့တော့ ကိုယ်တို့ တတ်နိူင်တာလေးတွေ ကိုယ်တို့လုပ်ကြတာပေါ့ လို့ပဲ အမြဲတွေးတယ် ။ နှမ်းတစေ့ထဲ နဲ့လည်း ဆီမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ပြောချင်လဲ ပြောကြလိမ့်မယ် ။ ဟုတ်တယ် ။ ကိုယ်တို့တွေဟာ ဘာမှတော့ အကြီးကြီးတွေ မလုပ်နိူင်တဲ့ နှမ်းစေ့ သေးသေးလေးတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို “ဆီ” ဖြစ်ဖို့ “နှမ်းစေ့လေး” တွေတော့ အများကြီးလိုတယ်လေ ။ ဟုတ်တယ်မလား ။ “နှမ်းစေ့လေး” တွေများမှသာ ဆီဖြစ်လာမှာကိုး ။ ပြီးတော့ ဆရာမောင်သစ်ဆင်း ပြောတဲ့ အဖိုးတန်ဆုံးလေးတွေ အတွက် ကိုယ်တတ်နိူင်သလောက် နဲ့ စေတနာ ကြိတ်စုံ ထဲမှာ အကြိတ်ခံပေးမဲ့ နှမ်းစေ့လေးတွေ အမှန်တကယ်လဲ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်လေ။ ကိုယ်ကတော့ “နှမ်းစေ့လေး” ဖြစ်ဖို့ တရက်ကို ၃၀၀ စုတယ် ။ ကိုယ်က အဲ့လောက်ပဲ တတ်နိူင်တာကိုး ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် အားမငယ်မိပါဘူး ။ “Something is better than Nothing” လို့ ကိုယ်ဖတ်မှတ်ဘူးတယ်။ စာဖတ်သူ… သင်ကော နှမ်းစေ့လေး တစေ့ မဖြစ်သင့်ဘူးလား ။ မဖြစ်ချင်ကော မဖြစ်ချင်ဘူးလား ။ ဘယ်ပြဌာန်းစာအုပ်၊ ဘယ်ဥပဒေ မှာမှ မသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ ကိုယ့်အထင် လူတိုင်းမှာ “နှမ်းစေ့လေး” ဖြစ်ဖို့ တာဝန်ရှိသလားလို့ပါ ။
စာကြွင်း။ ။ မောင်သစ်စင်းရဲ့ “ကြောက်စိတ်” ကိုဖတ်မိရင်း တွေးမိသည့် အကြောင်းကို ကိုလင်းညို အတွက် အမှတ်တရရေးသည် ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:57 PM4comments